निरन्तर उत्कृष्ट करदाता - होमपेज
निरन्तर उत्कृष्ट करदाता
उद्योगपति सिद्धार्थशमशेर राणा पाँचौँपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर बुझाउने करदातामा दरिएका छन् । सरकारले सातौँ कर दिवसको अवसर पारेर शनिबार उनलाई सम्मानित ग-यो । उनी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा पनि सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने उत्कृष्ट करदाता बनेर सम्मानित भएका थिए । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका अध्यक्ष राणा लगातार व्यक्तिगत आयतर्फ उत्कृष्ट करदाता बन्दै आएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न विधाका उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने गरेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राणासहित विभिन्न १५ विधाका उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरे । उद्योगपति राणाले नेतृत्व गरिरहेको कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ व्यापार–व्यवसायतर्फ सबैभन्दा बढी कर बुझाएर पाँचौँपटक उत्कृष्ट करदाता बनेको हो ।
व्यक्तिगत आम्दानीबाट बुझाउने कर नै व्यक्तिगत आयकर हो । खासगरी तलबबाट व्यक्तिगत आयकर तिरिन्छ । धेरै तलब हुनेले धेरै आयकर बुझाउँछन् । कम तलब हुनेले थोरै । व्यवसायीले तलब भत्ता र कम्पनीबाट पाउने लाभांश तथा बोनसको पनि आयकर बुझाउँछन् । राणाले इमानदारीपूर्वक आयकर बुझाउँदै आइरहेका कारण उत्कृष्ट करदाता बनिरहेको बताउँछन्, सिप्रदीका सञ्चालक शम्भु दाहाल ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अहिलेसम्म सातपटक उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरिसकेको छ । सुरुको वर्ष व्यवसायी पृथ्वीबहादुर पाँडे सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर बुझाउने करदाता बनेका थिए । सिद्धार्थ राणाले आर्थिक वर्ष ०६८/०६९, ०६९/०७०, ०७१/०७२, ०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा गरी पाँचपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिरेका छन् ।
सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी पनि व्यापार–व्यवसायतर्फ लगातार सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउने करदाता बन्दै आइरहेको छ । सिप्रदी आर्थिक वर्ष ०६९/०७०, ०७१/०७२, ०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिरेर उत्कृष्ट करदाता बनेको हो । दाहाल भन्छन्, ‘हाम्रो कम्पनी सरकारले लागू गरेको सेन्ट्रल बिलिङ मनिटरी सिस्टम (सिबिएमएस)मा आबद्ध हुने पहिलो कम्पनी हो । सरकारले कारोबार पारदर्शी बनाउन यो प्रणाली लागू गरेको हो ।’
राणा सेवा तथा उत्पादनमूलक व्यवसायमा संलग्न छन् । उनको पाँचतारे सोल्टी होटेल, सिप्रदी ट्रेडिङ, सिप्रदी अटो पार्टस्, सिप्रदी अर्थोमुभर्स, हाइड्रोपावर, ट्राभललगायत कम्पनीमा लगानी छ । ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनको मुख्य सेयर होल्डर हुन्, उनी ।
सिप्रदी ट्रेडिङ भारतीय टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता हो । नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने गाडीमा टाटा अग्रस्थानमा पर्छ । सिप्रदी ट्रेडिङकै मात्र वार्षिक कारोबार ३० अर्ब हाराहरी छ । अरू कम्पनीले पनि राम्रो कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । अवस्था यस्तो पनि देखिन्छ कि राणा परिवारले नेतृत्व गरिहेका सबै कम्पनी वित्तीय रूपमा अब्बल देखिन्छन् ।
उनले रविभवनमा पाँचतारे लक्जरी होटेल बनाउँदै छन् । करिब ६ अर्ब लगानी हुने बताइएको होटेलमा ८० कोठा हुनेछन् । साझेदारीमा नेपालगन्जमा सोल्टी होटेल सञ्चालनमा आइसकेको छ । राणा बर्दियामा ६० बिघा क्षेत्रफलमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । उनको सूर्य नेपालमा पनि लगानी छ । सूर्य नेपाल पनि लगातार सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउने कम्पनी बनिरहेको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई पछि पार्दै सूर्य नेपाल अग्रणी भएको हो ।
अधिकांश व्यवसायका सुरुवातकर्ता सिद्धार्थशमशेरका बुबा प्रभाकरशमशेर हुन् । उनले शाही परिवार (भिनाजु)ले खोलेको सोल्टी होटेललाई नेतृत्व दिएर मुलुककै अग्रणी बनाए । सोल्टीमा पनि उनको धेरथोर लगानी छ । सूर्य नेपाल, हाइड्रोपावर, सिप्रदी ट्रेडिङलगायत कम्पनीमा लगानी गरे । उनी संलग्न सबै कम्पनी अब्बल दर्जाका छन् । सबै कम्पनीमा पारदर्शी कारोबार हुने दाहाल बताउँछन् ।
प्रभाकरको परिवार मुलुककै कुशल व्यावसायिक घरानामा गनिन्छ । कम्पनीको कर्पोरेट कल्चर र काम गर्ने वातावरण राम्रो छ । राज्यलाई कर बुझाउने मामलामा अग्रणी छ । वित्तीय अनुशासन पालना गरेर व्यापार–व्यवसाय गरेकै कारण उत्कृष्ट करदाता भएको दाहाल ठोकुवा गर्छन् । उनी थप्छन्, ‘उहाँहरू पारदर्शी कारोबार गरी राज्यलाई पूरै कर बुझाएर पनि व्यवसायमा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बन्नुभएको छ ।’
प्रभाकरशमशेर राज्यलाई कर बुझाउने मामलामा सुरुदेखि नै बफादार थिए । जहिल्यै वित्तीय अनुशासन पालना गरेर व्यवसाय गरे । वित्तीय कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे । छोरा र कर्मचारीलाई पनि पारदर्शी काम गर्न प्रोत्साहित गरिरहे । बुबाको संस्कार छोराहरूले पनि अनुशरण गरेका छन् । वित्तीय अनुशासन पालना गरेकै कारण व्यवसाय फस्टाइरहेको छ ।
देशमा वार्षिक खर्बमा कारोबार गर्ने व्यावसायिक घराना धेरै भइसके । तर, पनि व्यक्तिगत आयकर तिर्नेमा सिद्धार्थशमशेर नै निरन्तर अगाडि देखिएका छन् । दाहाल भन्छन्, ‘यो परिवार कर तिर्न कन्जुस्याइँ गर्दैन । इमानदारीपूर्वक कर बुझाएकै कारण अग्रणी करदातामा पर्दैै आइरहेको हो ।’
‘सिद्धार्थशमशेरले आफ्नो तलब बढी राखेर आयकर बढी तिरिरहेको भन्ने होइन,’ दाहाल प्रस्ट्याउँछन्, ‘उहाँले तलब भत्ता, बोनस, लाभांश सबैको इमानदारीपूर्वक कर तिरेर उत्कृष्ट करदाता बन्नुभएको हो।’
दाहालले सन् १९९२ देखि सिप्रदीमा काम थालेका हुन् । त्यसअघि उनी भारतमा काम गर्थे । ‘मैले भारतमा १० वर्षजति काम गरेँ, त्यहाँ मेरो काम कर कार्यालय धाउने हुन्थ्यो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘त्यहाँ कसरी कर मिनाहा गर्ने, कसरी राज्यले दिएको करछुट सुविधा उपभोग गर्ने र कसरी कर कम तिर्ने योजना बनाउने भन्नेमै खटिएको हुन्थेँ ।’ सिप्रदी छिरेपछि उनलाई छुट्टै अनुभव भयो, यहाँ न त कर छली गर्न मालिकबाट प्रेसर हुन्थ्यो, न त करछुटको सुविधा लिन । ‘म अचम्ममा परेँ, उहाँहरू इमानदारीपूर्वक कर तिर्नुहुँदो रहेछ,’ उनी सुनाउँछन् ।
विश्वभरकै व्यवसायी कर छली गर्न खोज्छन् । भारतमा करछली अझ कहालीलाग्दो छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । दाहाल भन्छन्, ‘प्रभाकरको परिवार कानुनले दिएको कर छुटबाट फाइदा लिने चक्करमा पनि लाग्नुभएन ।’ उहाँहरूको इमानदारीलाई राज्यले पुरस्कृत गरिरहेको उनी सुनाउँछन् । कर्मचारीलाई पनि पहिला कानुन, अनि मात्र व्यवसाय भन्दै मोटिभेसन गर्छन् ।
‘उहाँहरू कम्पनीमा हस्तक्षेप पनि गर्नुहुन्न, व्यवस्थापनलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुुहुन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘पुरस्कार लिन पनि आफैँ अगाडि जानुहुन्न, कम्पनीको सिइओले पुरस्कार थाप्छन् ।’
बढी कर तिर्ने १५ करदाता
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी सूर्य नेपाल बनेको छ । सिद्धार्थशमशेर राणा व्यक्तिगत आयतर्फ बढी कर तिर्नेमा व्यवसायी बनेका छन् । निर्यात उद्योगतर्फ डाबर नेपाल उत्कृष्ट करदाता बनेको छ भने उद्योगतर्फ हिमाल पावर, कृषि तथा व्यापारतर्फ निम्बस, सहकारी तथा लघुवित्ततर्फ छिमेक लघुवित्त कम्पनी उत्कृष्ट करदाता बनेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ नबिल बैंक, बिमातर्फ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, स्वास्थ्य तथा शिक्षातर्फ विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, सूचना प्रविधितर्फ एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल, पर्यटनतर्फ हायात होटेल, व्यापारतर्फ सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी उत्कृष्ट करदाता बनेका छन् ।
वार्षिक ४० करोडसम्म व्यवसाय गर्नेमध्ये नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड, वार्षिक ४० करोडदेखि ८० करोडसम्म व्यवसाय गर्नेमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, र समयमै मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण पेस गरी कर चुक्ता गर्ने घोराही सिमेन्ट पनि सरकारबाट सम्मानित भएका छन् ।
राष्ट्रिय कर दिवसको अवसर पारेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेका हुन । देशभरका १८ लाख करदाताबाट उत्कृष्ट १५ लाई सम्मानित गरिएको हो ।
admin02823 २ वर्ष अगाडि फिचर
ओझेलमा झलकमान गन्धर्व
सल्लाघारीमा निर्माण उपकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मेला
पानी संरक्षण गर्न पोखरी